ဥရောပမှအကြီးမားဆုံး SNEAKER ဖြစ်သည့် CREPE CITY INSIDE: 'သင်တန်းဆရာများ ၀ ယ်လိုအားသည်ပိုမိုကြီးမားလာလိမ့်မည်' - သတင်း
'လေ့ကျင့်သူများအတွက်ဝယ်လိုအားကသာပိုများလာလိမ့်မယ်': Crepe City, ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံး Sneaker ဖြစ်ရပ်အတွင်းပိုင်း
စနေနေ့တွင် Crepe City, ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံးစနီကာဖြစ်ရပ်သည်လေ့ကျင့်ရေးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးကိုပြသသည့် ၁၆ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ရပ်အတွက်အရှေ့လန်ဒန်သို့ပြန်သွားသည်။ Brick Lane ရှိ Truman Old Brewery တွင်ကျင်းပပြီး၊ ကမ္ဘာအနှံ့မှ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများသည်မည်သည့်သန့်ရှင်းသောမြက်ခင်းပြင်ကိုဖမ်းစားနိုင်မည်ကိုသိမြင်လာခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းပို့ချသူများသည်ဖက်ရှင်လောကမှမည်သည့်အခါမျှအတိအကျမသွားခဲ့ကြသော်လည်း၊ ယနေ့ဖိနပ်လုပ်ငန်း၌သူတို့၏သာလွန်ကောင်းမွန်မှုသည်ပြိုင်ဘက်ကင်းကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးသင်တန်းပို့ချသူများသည်ဗြိတိန်၌ဖနောင့်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအားဖြင့်ကျော်ကြားမှု၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အားကစားကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်တန်းဆရာများပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ လူငယ်များသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုသင်တန်းပို့ချကြသည်။
စနေနေ့မှာလူပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ကန့်သတ်ထားသောထုတ်ဝေမှုအတွဲများကိုရှာဖွေရန်၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ခေါင်းအဖော်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ သူတို့၏ချောင်းများကိုဆေးကြောသန့်စင်ရန်၊ အနီရောင်အစင်းကိုခံစားရန်နှင့်အရွယ်အစားဖြင့်ကျင်းပသောဆွေးနွေးမှုကိုနားထောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ influencer ပူးပေါင်းဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်း ၀ ယ်သူအမျိုးမျိုးအားစကားပြောခဲ့သည်။ သင်တန်းဆရာများ၏ ၀ ယ်လိုအားသည်ဘာကြောင့်တုန်လှုပ်နေသည်ဟုထင်မြင်ရကြောင်းနှင့် Crepe မြို့ကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလူကြိုက်များလာရသည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်။ သဘာဝအားဖြင့်၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများအားသူတို့၏အချိန်တိုင်း fave trainer နှင့်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် (စတန်စမစ်၏ဖော်ပြချက်မရှိ)
Steph F. Morris (အလွတ်တန်းရုပ်ပြသရုပ်ဖော်သူ)
ထိုနေ့တွင် Air Max 95s သည်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
@vnamagazine မှာရှိတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေကိုငါလာမယ့် # VNA32 ပြinနာမှာကျွန်ုပ်ပါဝင်ခြင်းအတွက်အရာအားလုံးကိုကန်ခြင်းနှင့်ပုံဥပမာအကြောင်းပြောခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးသော @jamesmeasom ၏ဓာတ်ပုံ။ ဒီဇင်ဘာလဆန်းအစောပိုင်းတွင်စတိုးဆိုင်များမိတ္တူကူးခြင်း ??
Steph Morris (@stephfmorris) မှ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ညနေ ၁၂း၁၅ နာရီတွင်တင်ပြခဲ့သည်
မင်းအရင် Crepe City ကိုရောက်ဖူးလား။
SFM: ဟုတ်တယ်၊ ဒီဟာကဒုတိယအကြိမ်ပဲ။ ငါ 2014 ခုနှစ်တွင်လာ။ ယနေ့ပြန်ပြန်ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လူများ၊ ကွန်ယက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အတော်လေးရောင်းပါတယ်
သင်ဘယ်လို crepes သရုပ်ဖော်သို့ရခဲ့တာလဲ
SFW: ငါဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကိုလေ့လာခဲ့ပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းရေးဆွဲကြပြီ။ ငါအရွယ်အစားမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်? ပြီးတော့တွားသွားသတ္တဝါတွေစတင်ဆွဲထုတ်ပြီးအဲဒီကနေကြီးထွားလာတယ်။ ယခုတွင်ငါသည် Reebok, Adidas originals, High Snobiety စသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပစ္စည်းများကိုလုပ်ပြီးပြီ။
ယနေ့ဆံပင်, မနက်ဖြန်သွားပြီ x #haircut #dkuk
၂၀၁၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ ၇း၂၇ တွင် PDT သည် Keziah Reed (@keziahgareed) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
သင့်ရဲ့ 97s တော်တော်အရူးဖြစ်ကြ, သင်ဘယ်မှာသူတို့ကိုရခဲ့တာလဲ
TO: ငါတကယ်သူတို့ကိုအွန်လိုင်းမက်တယ်, Air Max 97 ကိုခေါ်အုပ်စုတစ်စုအပေါ်။
ငါတို့သူတို့သည်သင်၏ fave သင်တန်းဆရာများကယူ?
TO: ဟုတ်တယ်၊ ငါခန့်မှန်းနေတဲ့ silhouette ကိုပဲချစ်တယ်။ ငါက Air Max 97 ၏နှစ် 20 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ 2017 အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကငါကြားအထူးအထူးထုတ်ဆောင်တော့မယ်။ Nike ကမူရင်း 97s ကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်းအီတလီ၌သာပြန်လည်ရောင်းချခဲ့သည်။
TO: ဟုတ်ပြီ၊ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့တတိယအကြိမ်ပါပဲ။ ဒါဟာဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်လို့သင်ဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေရရှိနိုင်မှာပါ။
Slocal ပြီးနောက်ပါတီမှာ DJ-ing ခဲ့ကြသည်
ဂ: လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက်ကဒီအဝတ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စတင်လုပ်ခဲ့ပြီးကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းစတိုးစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအခြေခံအားဖြင့်မှန်သောကြောင့်တိုးတက်မှု၏ဆောင်ပုဒ်စဉ်ဆက်မပြတ်လိုက်စားနှင့်အတူဤနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံး tees ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အစဉ်အမြဲပိုပြီးလုပ်နေစဉ်ဆက်မပြတ်လိုက်ရှာနေကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ UK အင်္ဂလန်ဟစ်ဟော့ပ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်တွင်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါတီပွဲပြီးနောက်တရားဝင် Crepe City ကိုပါတီပွဲပြီးနောက်ဤလမ်းမှလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ 93 Feet East တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဂ: ငါတို့ရှိသမျှသည်သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့စုံတွဲတစ်တွဲသည် Essex uni တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ကျန်တဲ့သူများသည်လန်ဒန်မှဖြစ်ခြင်းမှသာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ့်ကိုဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ရှိပြီးတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ယနေ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး စီရှိသည်။ MC ၂ ခုနှင့်ပင်လယ်ပြင်တစ်လွှားမှလာသည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိသည်။
ဂ: ငါဗြိတိန်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်အချိန်ကိုမှန်ထင်ပါတယ်။ ဂီတ၌သင် Skepta ဤမျှလောက်များစွာသော grime MC များအတွက်တံခါးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်အမြဲတမ်းရှိခဲ့သော်လည်းယူကေယဉ်ကျေးမှုသည်ယခုအခါအသိအမှတ်ပြုခံရပြီးဂုဏ်ပြုခံရသည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်တွင် Lil Simz ကဲ့သို့သောလူကြီးများသည်ကြီးပြင်းလာကြပြီးလူအများကသူတို့ခံထိုက်သောအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရန်မျှော်လင့်ကြသည်။
* တွန့်ဆုတ်စွာ crepe ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောအချို့ Qs မေးမြန်းခြင်း *
ဟေး၊ Yeezys ကိုမင်းဝတ်ထားတာ။ မင်းကလေ့ကျင့်ရေးသမားတစ်ယောက်အတွက်ဘယ်လောက်သုံးတယ်။
H: ငါအများဆုံးသုံးစွဲခဲ့တာကတော့£ ၄၅၀ ဖြစ်သည်။ ငါပိုင်သုံးခုပတ်ပတ်လည်သာပိုင်ဆိုင်ဒါကြောင့်ငါကထွက်ညီမျှပုံပါဘဲ။
H: ဟုတ်တယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့တတိယအကြိမ်ပါ။ ဒီဟာကငါသွားတက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောသင်တန်းနည်းပြပဲ။
ဂျေ: ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များစွာကိုကျွန်ုပ်သွားပြီး eBay မှပစ္စည်းများကိုရယူသည်။ ငါတကယ် eBay အပေါ်တစ် ဦး fiver အဘို့ဤတယ်။
မင်းရဲ့ crepes ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းမလဲ
ဂျေ: အဝတ်လျှော်စက်ထဲတွင် (ရယ်မောခြင်း) သူတို့ကိုငါအပေါ်မှာခေါင်းအုံးတင်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တယ်။
ဂျေ : Wallabees Clarks ။ ဒါကအတိအကျသင်တန်းဆရာမဟုတ်ပါဘူးရဲ့ (နောက်တဖန်ရယ်တတ်)?
Chariza Miranda (@chariza_) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်ညနေ ၃း၀၀ နာရီတွင် PDT တွင်တင်ခဲ့သည်
ဂ: Hmmmm, ထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲမေးခွန်း။ ငါကဗင်နစ်စဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ Yeh Vans ဂန္ထဝင်။
တ ဦး တည်း ဦး တည်ချက်တန်ဖိုးရှိသည်မည်မျှ
ဂ: သူတို့ကိုငါညစ်ပတ်အောင်မလုပ်ဘူး။ ငါသူတို့ညစ်ပတ်ရနိုင်ရှိရာတစ်နေရာရာသို့သွားတော့မယ်ငါသိလျှင်ငါကောင်းတဲ့သင်တန်းဆရာမဝတ်ကြဘူး။ ငါသော်လည်းငါ့စကားဝိုင်းနှင့်ဗင်ညစ်ပတ်ကြကုန်အံ့။
ဂ: ငါတကယ်သူတို့ကိုကြိုက်လျှင်, ငါ£ 100 ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
ပရီမီယံဖိနပ်သန့်စင်သော Jason Markk
ဂ: အဘယ်သူမျှမငါကဒီမှာခြောက်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ် Crepe စီးတီးနှင့်ပူးပေါင်းကာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပြန်လာခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဂ: အကြမ်းအားဖြင့်£ 70 ။
ဂ: အရွယ်အစား 3s နှင့် 4s ကဲ့သို့သောခြေထောက်သေးငယ်သူများအတွက်သင်တန်းဆရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရောင်း ၀ ယ်သည်။ ဖိနပ်အရွယ်အစားသေးငယ်သောသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်စုံတွဲကိုရှာရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သင်တစ်စုံတစ်ရာသောစတိုးဆိုင်သို့သွားပြီး၎င်းတို့သည်သင်၏အရွယ်အစားတွင်မပြုလုပ်ကြသောကြောင့်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ crepes များကိုဘယ်မှာရှာသနည်း။
ဂ: အများအားဖြင့်အွန်လိုင်း eBay ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များ။ ကြီးမားတဲ့ဖြန့်ချိမှုလည်းမရှိသည့်အခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခုန်ချလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များမှသို့မဟုတ်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်စပ်ကြားရှိလူများထံမှ ၀ ယ်သည်။
ဂ: Nike Air Force 1. သူတို့သည်အခြေခံကျပြီးအဆင့်မြင့်ပြီးအရာအားလုံးနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ငါတကယ်ဖက်ရှင်လောကထဲရောက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါ့စတိုင်တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတာကောင်းတယ်။
LANDAN မှာ GRUMPY BE
အမေလီယာဂရေ့စ်တင်သောပုံတစ်ပုံ။ 2:12 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 22, 2016 တွင် (@milly_day)
M: ပန်းရောင်ဖဲထဲတွင် Air Max 95 ။ အစဉ်မပြတ်ငါသော်လည်းမဆိုသင်တန်းဆရာအတွက်နှစ်သိမ့်ကျော်စတိုင်အဘို့အသွားပါ။
M: အနိမ့် 100s ငါပြောချင်ပါတယ်။
M: ရေစိုခံရေမှုန်ရေမွှားနှင့်ကလေးအစိုဓာတ်ကိုသုံးပါ။ သူတို့ကိုအန္တရာယ်များတဲ့နေရာတွေမှာမ ၀ တ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုညစ်ပတ်အောင်မလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
Kurupt FM ရေမှ Fantasy ခေါ်
M: ဂျော်ဒန် ၄ ။
M: £ 100-120
ဂျေ: Air ကိုမက်စ် 97s ။ လူတိုင်းကသူတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးလိုက်ဖက်တဲ့ဖောက်သည်ရှိတယ်။ လူတွေကသူတို့ဆီပြန်လာကြမှာပဲ။ အတိတ်အတွေ့အကြုံကနေသူတို့ရောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
သင်သင်တန်းပို့ချသူများအတွက် ၀ ယ်လိုအားနှေးကွေးသွားမယ်လို့ထင်ပါသလား။
ဂျေ: ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်! ဘာမှပိုကြီးလာရင်တော့ဘယ်တော့မှသေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မအသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ။ အခုတော့သူတို့ထဲကိုဆယ်ကျော်သက်တွေများလာတယ်။ လူငယ်များသည်သင်တန်းဆရာများကိုကြိုက်လာကြသည်။ သင်တန်းဆရာများအတွက်လူကြိုက်များမှုအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာသည်။
ဂျေ: ဗင်ကား။ သူတို့ကသူတို့ပဲစစ်မှန်လား ငါသည်လည်း Nike TN ရဲ့ပြောရတယ်။
ဂျေ: ပြည်သူလူထု၊ အွန်လိုင်းဖိုရမ်များ၊ စကားလုံးများ၊ ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အရင်းအမြစ်မှရရှိသည်။